Kulan lagaga Arrinsanayo Horumarinta Biyaha Somaliland oo ka Furmay Magaalada Hargeysa | Hargeisa Water Agency
Kulan lagaga Arrinsanayo Horumarinta Biyaha Somaliland oo ka Furmay Magaalada Hargeysa
Posted on November 26, 2014 Posted By: adminCategories: NEWS
Hargeysa (HWA)- Wasaaradda Khayraadka Biyaha Somaliland, ayaa qabatay maanta shir ujeeddadiisu la xidhiidho sidii loo horumarin lahaa adeegyada biyaha iyo soo bandhigga baahiyaha biyood ee ka jira degaannada kala duwan ee dalka.
Kulankan oo soconaya muddo laba maalmood ah waxa ka qaybgalay maareeyayaasha wakaaladaha biyaha ee caasimaha gobollada dalka, isu-duwayayaasha gobollada ee Wasaaradda Khayraadka Biyaha iy wakiillo ka kala socday shirkadaha ka shaqeeya biyaha ee dalka ka hawlgala.
Wasiirka Wasaaradda Khayaadka Biyaha Md. Xuseen Axmed Cabdulle oo furitaankii shirkaasi ka hadlay, ayaa sheegay in ujeeddada shirkani tahay sidii la isku waydaarsan lahaa fikradaha lagu horumarin karo adeegyada biyaha ee Wasaaraddu hayso iyo sidii la isula eegi lahaa.
“Waxa la innaga doonayo dhammaanteen innagoo koox ah, waxa dadku inaga filayaan iy waxaynu dadka u sheegayno waxa la innaga rabaa labadaa casho inuu si cad u soo baxo, waa barmaamij wayn oo in badan la innaga sugayey oo ka wasaarad ahaan la innaga doonayo in aynu muujinayo waxqabadkeenna iyo waxqabadka mustaqbalka la innaga doonayo,” ayuu yidhi Wasiir Xuseen.
Sidoo kale, Agaasimaha guud ee Wasaaradda Khayraadka Biyaha Md. Cabdirisaaq Jaamac Nuur, ayaa isna u mahadceliyey ka qaybgalayaasha shirka, isagoo xusay in shirka lagu falanqayn doono mustaqbalka dhaw iyo ka fogba qorshaha horumarinta biyaha ee wasaaraddu ku shaqayn doonto, isla markaana lagu darsi doono baahiyaha biyaha ee ka jira guud ahaanba dalka.